आँचलका श्रीमान् ‘बच्चाको बुबा’ भएको चर्चा, के हो बास्तबिकता ? – " सुलभ खबर "
प्रियंका भन्छिन्- ‘वर्षाले माफि मागिसकिन्, हामीले माफ नदिए कसले दिन्छ’
उनले मा’फि पनि मागिसकिन् । हामीले हाम्री चेलीलाई मा’फ नगरे कसले गर्छ ? हाम्रो चेलीको
जलशाहले खोक़्रो राष्ट्रवाद मु,र्दा,बा,द भन्नुकाे कारण यस्ताे पाे रहेछ !
आइतबार बिहान भाइरल भएकाे एउटा अन्तर्वार्ताकाे कारण वर्षा राउत सामाजिक सञ्जालमा आलाेचित बन्न पुगेको छिन्
काठमाडौँ । आइतबार बिहानैदेखि दिनभरी सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पायो जुन थियो भारतीय
काठमाडौं । चर्चित नायिका वर्षा राउतले आफूले एक शब्दपनि नेपाल र नेपालीहरुको विरुद्धमा नबोलेको स्पष्ट